Baarlamaanka Puntland oo meelmariyay golaha wasiiradda cusub - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandBaarlamaanka Puntland oo meelmariyay golaha wasiiradda cusub
February 16, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha baarlamaanka Puntland ayaa manta oo Sabti ah meelmariyay golaha wasiiradda cusub oo uu dhawaan soo magacaabay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni.
63 xildhibaan oo kulanka fadhiyay, ayaa ogolaaday in la meelmariyo golaha wasiiradda.
Asbuucii lasoo dhaafay, Deni ayaa ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiiradda. Golaha cusub ee wasiiradda ayaa ka kooban 18 Wasiir, 21 Wasiir ku-xigeen iyo 9 Wasiiru-dowle, taasoo ka dhigaysa wadarta guud gole dhan 48 xubnood.
Falaanqeeyaasha siyasadda ayaa walaac ka muujiyay shakhsiyaadka uu madaxweynuhu u soo magaacabay jagooyinka sare sare ee muhiimka ah sida Wasaaradaha Arrimaha Gudaha, Maaliyada, Qorshaynta, Aminga iyo Deegaanka.
Paul Formosa oo ahaa madaxii dekada Boosaaso ee la dilay oo aas loogu sameeyay dalkiisii
Mid kamid ah ilaaladiisa oo ku dhaawacmay qarax magaalada Boosaaso lagula beegsaday wasiirkii hore ee qorshaynta Puntland
Boosaaso-(Puntland Mirror) Miinada wadada lagu aaso ayaa lala beegsaday gaariga wasiirkii hore ee qorshaynta Puntland Shire Xaaji Faarax gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso maanta oo Axad ah. Shire Xaaji oo gaariga la socday ayaan wax dhibaato [...]